सीमा विवाद: भुटानको साकतेङ राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि चीनको दाबी -
सीमा विवाद: भुटानको साकतेङ राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि चीनको दाबी
२ पुष २०७७, बिहीबार २१:२५ 213 पटक हेरिएको
एजेन्सी । सानो देश भुटान सीमा विवादको चपेटामा परेको छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको भौगोलिक हिसाबले सानो देश भुटान आफ्ना ठूला दुई छिमेकी सीमालाई लिएर विवादमा रहेका बेला त्यसको चपेटामा परेको महसुस गरिरहेको छ।
चीनका प्रतिनिधिहरूले भने उक्त क्षेत्र विवादित रहेकोले त्यहाँ कुनै रकम सहायतास्वरूप दिन नहुने भन्दै विमति जनाएका थिए।
भुटानले चीनको दाबी अस्वीकार गर्दै सीमालाई लिएर विगतमा भएका २४ चरणको वार्तामा यो क्षेत्रबारे कहिल्यै कुरा नउठेको जनाएको थियो।
यो वर्षको सुरुमा २५ औँ चरणको वार्ता राखिएको भए पनि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण त्यो पछि धकेलिएको थियो।
गत जुलाई महिनामा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले “चीन र भुटानबीचको सीमाङ्कन अझै बाँकी रहेको र मध्य, पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विवादित रहेको” बताएपछि कुनै पनि दुविधा बाँकी रहेको थिएन।
पूर्वी भागले पक्कै पनि साकतेङ क्षेत्रलाई नै जनाउँथ्यो।
हालैसम्म चिनियाँ नक्साले साकतेङलाई भुटानमै देखाएको थियो
भारत र चीनको विवादको बीचमा परेको महसुस गर्नु भुटानका लागि अनौठो होइन।
तीन वर्षअघि भारतमा दोक्लाम र चीनमा दोङ्लाङ भनिने क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटका कारण सीमासम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो।
भविष्यमा हुने कुनै पनि द्वन्द्वमा चिनियाँ फौजले उक्त करिडोर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसक्ने डर भारतलाई छ।
दुवै देशले वार्ताहरू जारी नराखे पनि सीमा विवाद कसरी चर्किन सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ।
भूउपग्रहका तस्बिरहरूले दोक्लामको द्वन्द्व भएको क्षेत्र नजिकै चीनले हेलिपोर्ट लगायत बृहत् रूपमा सैन्य सञ्जाल बनाएको देखाएका छन्।
तर बेइजिङस्थित चिङ्खुवा विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्यूट अफ बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभकी शोधकर्ता डा. लु याङको भने फरक दृष्टिकोण छ।
“सीमालाई लिएर चीनले भुटानलाई थिचोमिचोमा राखेको होइन। भुटान र चीनको सीमा विवाद चीन र भारतको सीमा विवादसँग छुट्याएर हेर्न नसकिने भएर यस्तो भएको हो। यो नै मुख्य चुनौती हो,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।
तर भुटानसँग विकल्पहरू भने सीमित छन्।
भारत र चीनबीच दशकौँदेखि तनावपूर्ण स्थिति छ र साम्य हुन पनि कठिन छ।
थोरै जनसङ्ख्या भएको भुटानसँग अहिलेको गतिरोधमाझ थोरै मात्रै विकल्पहरू छन्
भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार थुप्रै चरणमा वार्ताहरू भए पनि चीन उक्त क्षेत्रबाट फिर्ता हुन अस्वीकार गरिरहेको छ।
भारतका छिमेकीहरू चीनको बढ्दो सैन्य र आर्थिक सामर्थ्यसँग उस्ले कसरी जुध्ने निर्णय गर्छ भनेर निकट रूपमा हेरिरहेका छन्।
भारत पनि आफू हारेको देखिन चाहँदैन।
उनका अनुसार अबको बाटो के हुनसक्ला भने चीनसँग पनि कुरा गरिरहने र सँगसँगै भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्मान गर्ने।
इतिहासकार डा. फुन्त्शो भन्छन् भारत र चीनले आफ्नो शक्ति शान्तिका लागि नभई अस्थिरता ल्याउनका लागि प्रयोग गर्छन्।
भुटानजस्तो सानो देशका लागि चिन्तित अवस्थामा रहनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्। बीबीसी नेपालीबाट सभार